Dad haraad ugu dhintay gobolka Jubada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dad haraad ugu dhintay gobolka Jubada Dhexe
A warsame 2 October 2014 2 October 2014
Mareeg.com: Saddex qof ayaa labadii cisho ee la soo dhaafay harraad iyo gaajo ugu geeriyootay deegaannada Diif iyo Deg-elemaa, oo hoos-taga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose.
Maxamed Cabdi Suraa, oo ka mid ah odayaasha deegaannadaas, ayaa warbaahinta u sheegay dhimashada saddexda qof oo mid ka mid ah uu ahaa qof da’ ah.
Wuxuu tilmaamay in biyo la’aan baahsan ay ka jirto deegaanka. Dadka ku nool deegaannada ay abaartu ku dhufatay ayaa u badan dad xoolo-dhaqato ah.
Maxamed Cabdi ayaa xusay in deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose ay ka jirto abaar iyo biyo la’aan saamayn ku yeelatay dadka iyo xoolaha.
Hoggaamiyaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa lacag dhan $50,000 wuxuu ugu deeqay in wax looga qabto abaarta ka jirta deegaannada Jubbooyinka ee uu ka arrimiyo maamulkiisa.
Axmed ayaa dhanka kale beesha caalamka ugu baaqay iney kaalmo lasoo gaaraan dadka abaaruhu saameeyeen, waxaana kaalmadii ugu horreysay keenay Bisha Cas ee Turkiga.
Beyle “Caalamku wuu la dhacsanyahey Soomaaliya ″
Wasaarada Amniga: Qof ka yar 40 sano sooma geli karo Muqdisho